NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - CES မှာ Virtual Reality ၏အခြားကမ္ဘာ့ဖလား
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » CES မှာ Virtual Reality ၏အခြားကမ္ဘာ့ဖလား
CES မှာ Virtual Reality ၏အခြားကမ္ဘာ့ဖလား
"ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၌အချက်အလက်များ၏နီးပါးရှစ်ဆယ်အရင်ဖျော်ဖြေသယ်နိုင်တယ်။ " - "ဂျော်နီ Mnemonic"Tristar, 1995
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသပ်သူများ VR (virtual reality) ၏အောင်မြင်မှုအပေါ် lukewarm များမှာသော်လည်းသင်က HMDs (ဦးခေါင်း-တပ်ဆင်ထား display တွေ) စိတ်ကူး immersive ကမ္ဘာနှင့်ဂိမ်းများသို့သငျသညျကိုယူပြီးနှင့်အတူ CES စဉ်အတွင်းပြခန်း၏ပတ်ပတ်လည်အများကြီးကြည့်အဖြစ်, သင်ကမပြောနိုင်ဘူး။
ups ကျ - Gartner မှဖွင့်ဖောင်းပွ Cycle နှင့်သမဝါယမ Insights က start-ups နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထိခိုက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ အကျိုးစီးပွားတည်ဆောက်ခြင်းအခါအသစ်ရှေးရှေးအတည်ပြုပြီးသောအခါကျေးရွာကော်မတီများအလျင်စလိုနှင့်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့ကျီ burner ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုက်ဆံရပါတယ်။ ထိုအခါက MBA အတည်ပြုပြီးသောအခါကျေးရွာကော်မတီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်စက်နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်အချေနိုင်အောင်များလွန်းရှေးရှေးတူယုန်လိုက်ဖမ်းနေကြတယ်နားလည်သဘောပေါက်။
ဒါပေမယ့်ပြောဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် "ဝါး" CES ဒီနှစ်ဒါမှအကြောင်းအရာဗဟိုပြုအခါ။
Jeezz, သင်တိုင်းအလှည့်မှာ HMDs နှင့်အတူဆင်ကန်းတောတိုးန်းကျင်ထိ မိ. လဲစရာရှေးရှေး dodging ခဲ့ကြသည်။
ယင်းယူနစ်ပေါ်ခါးနှင့်အတူ, ငါစဉ်းစားနိုင်သမျှသော blinders နှင့်အတူမြင်းများဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြပွဲမှတက်ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသပ်သူများရုတ်တရက် VR မှဝါးဟု, စိတ်-လိမ်များအတွက်နည်းပညာရဲ့ရိုင်းအောင်မြင်မှုခန့်မှန်းချက်, စိတ်ကူး immersive ကမ္ဘာနှင့်ဂိမ်းများမှ lukewarm ကြ၏။
အဆိုပါကြီးမားတဲ့ပြဿနာသာမန်, အတည်ပြုပြီးသောအခါကျေးရွာကော်မတီများ (အကျိုးတူအရင်းရှင်) နှင့်အစေးကလူတူတိုးပွား (Pokemon Go ကို) နဲ့ရေပုံးနဲ့တစ်ဦးနားကြပ်နှင့်အတူဘာမှအတွက် VR ထားတော်မူ၏။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါသူတို့ကသစ်ပင်များများအတွက်သစ်တောမမြင်ရနိုင်!
သူတို့က Oculus '' Palmer က Luckey အဆိုပါ Rift ပေါ်တွင်တင်အခါဘူတာရုံ left သောစားသုံးသူ VR ဖောင်းပွရထားစီးနင်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ publicists အများစုဟာသူတို့ရဲ့တဲပုအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယ ဟူ. ချေါဝျေါ အစစ်အမှန် VR အရာ-ကွန်ပျူတာ-tethering (Oculus Rift က HTC Vive, Sony က နှင့် ... ) သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းညှပ်-On ပစ္စည်းပစ္စယ (Samsung ကဂီယာ Google ကဒေးဒရင်းမ်, Zeiss နှင့်အခြားသူများတစ် gaggle) -even သူတို့သာ 360 အကြောင်းအရာဖေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရလျှင်။
အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်အခုထက်နေသော်လည်း, ကြီးထွားမှု (အဓိက Processor ကိုရှေးရှေးသောကြောင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်Intel က, Nvidia က, AMD ၏, Qualcomm မှ Samsung က) ပြီးသားသစ်ကိုအာကာသတစ်ခုလက္ကားကတိကဝတ်စေပြီ။
ထိုအခါအဓိကကစားသမား (ဗျည်းအက္ခရာ, Facebook, Sony က, Samsung, HTC) နှစ်ဦးစလုံးခြေနှင့်အတွက်ခုန်ချပါပြီ။
ငါပြပွဲ, VR မှာသူနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရတဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Lewis က Smithingham (30ninjas) ဆိုသည်ကား, "ဒါကအဓိကကစားသမားများအားလုံးအပေါ်ထဲမှာအလေးချိန်နှင့်အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့ကြကြောင်းသမိုင်းအတွက်အနည်းငယ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအစိုင်အခဲနှင့်စီးပွားရေးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာကြပါပြီဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာအပေါ်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်ရဲ့။
"ကံမကောင်းစွာပဲ, overhyped ခဲ့ရဲ့" သူကဆက်ပြောသည်။ "ဒါဟာကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်း 2018 သည်အထိထိုကဲ့သို့ဧရာမီးမောင်းထိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ "
ကြီးမားတစ်နေ့နေ့ - VR စူပါအေးမြသည်နှင့်တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားသောဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရံဖန်ရံခါနေ့ချင်းညချင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ content - စျေးကွက်စုစုပေါင်းဂေဟစနစ်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါကအစောပိုင်းသုံးထက်ကျော်လွန်စားသုံးသူလက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုအသိအမှတ်မပြုချင်ထက်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။
မိမိအခန့်မှန်းချက်တိုးတက်မှုနှုန်း 2026 (ဝင်ငွေ $ 38B) ကခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လာ, နောက်ငါးနှစ်ကြာအတော်လေးကျိုးနွံကြလိမ့်မည်မှတ်ချက်ပြုကြောင်း Greenlight Insights ကမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။
Nvidia ၏အနည်းဆုံးအရာရှိများနှင့် Intel က'' s ကိုပြခန်းကိုသတိပြု, စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလျင်မြန်စွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြပွဲကာလအတွင်းပိုပြီးအီရန်ခဲ့ကြသည်:
အလုပ်လုပ် tools များရာအရပျ၌ရှိကြ၏
တိုင်းဂိမ်း developer အစာရှောင်ခြင်း-move, အဖြူရောင်-လက်ခေါက်ဆစ်, စွဲငြိဖွယ်ရာဂိမ်းများကိုပို့ဆောင်သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်
နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ ဟောလိဝုဒ် စတူဒီယိုနှင့် 2017 နီးပါးတစ်ဒါဇင် tentpole VR ရုပ်ရှင်၏အဖွင့် mark ပါလိမ့်မယ်
"ကျနော်တို့ VR ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အလုပ်လုပ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်သုံးစွဲပါတယ်" ယင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Intel က အဖွဲ့မှတ်ချက်ချသည်။ "ကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်စမ်းသပ်ပါနှင့်သင်ကကြီးထွားလာသောအမျိုးအစားဖြစ်မယ့်ငါတို့သိကြ၏။ "
တကယ်တော့ VR လေယာဉ်မှူးများအတွက် Link ကိုသင်တန်းပေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအစောပိုင်း 1900s ကတည်းကသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၏ပစ္စည်းပစ္စယခဲ့; ပင်အစောပိုင်းက 360 ဒီဂရီကြည့်ရှုနှင့်အတူ။ အဆိုပါ Link ကိုသင်တန်းပေးဒေါ်လာ၏လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဘီလီယံကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ဖြစ်ကောင်းဘဝတွေကိုရာပေါင်းများစွာ။
Nip '' ဎ Tuck - ကလေးတွေ VR သူတို့ရဲ့ခံစားဘို့လုံးဝတီထွင်ခဲ့သည်ထင်နေစဉ်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ပညာပေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအထူးသဖြင့်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ နည်းပညာရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ consumerization ကိုနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်သည်ဤဒေသများအတွင်းအလျင်အမြန်ဆင်းလာကြပြီ။
ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကကျောင်းသားလေ့ကျင့်ရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကြွယ်ဝစေနိုင်ကြောင်းကိုမည်သို့သိမြင်လျှင်မတိုင်မီဒါဟာတာရှည်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစားသကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မဟုတ် ထငျရာစိုငျးက Sky သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့် မမြင်နိုင်သော ထိုအခါမူကားအဘယ်သူမျှမနေတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဖြစ်လို၏။
CES မှာရှေးရှေးအဆိုပါ VR စျေးကွက် 10 အားဖြင့် $ 2018 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိနိုင်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုစျေးကွက် segmented ဖြစ်ပါတယ်:
သင်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာဂိမ်းနေတစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ကူး, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ဖြစ်ချင်လျှင်၎င်း, သငျသညျ Nvidia စွမ်းအားဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, Intel က သို့မဟုတ် AMD ၏ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်း console က။ တကယ်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုဂရုစိုက်သူတွေကိုကချောမွေ့, မတည်မငြိမ်ဖြမ် / ကြားခံ-အခမဲ့ VR ရွှေ့ဖို့အာဏာကိုကြာသိရကြ၏။
သငျသညျ YouTube ကိုသို့မဟုတ် Facebook တိုက်ရိုက်ထံမှလျောက်ပတ်သော On-The-go ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ကြွား-အကြောင်းကို-ကြောင့်ဗီဒီယိုများနဲ့တူခဲ့လျှင်, သင့်စမတ်ဖုန်းကိုတခုတခုအပေါ်မှာ HMD ပါးရိုက်ခြင်းနှင့်ထိုသို့သွားပါ။ အကြီးမားဆုံးပြဿနာအတွင်းရှိ display နှင့် Processor ကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းဖြစ်မယ့်နေသည်။ ထို့အပြင်ယူနစ်ဖုန်းကိုအပူတွေအများကြီး generate နှင့်ဘက်ထရီအပေါ်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ယိုစီးထားတော်မူ၏။
အများစုကစျေးကွက်သုံးသပ်သူများကတဦးတည်းကြီးတွေပုံးအဖြစ် VR ဆက်ဆံပါ။
အဆိုပါ Tractica အဖွဲ့သည်တစ်မူထူးခြားတဲ့စျေးကွက်အဖြစ်မိုဘိုင်း (ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အသုံးပြုခြင်း) ရှုမြင်သောအနည်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်း VR - အဆိုပါထွန်းသစ်စ VR ဈေးကွက်တစ်ဖြေရှင်းချက်-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကရှည်လျားသောခရီးစမတ်ဖုန်းကျော် HMD VR အဓိကကြည့်ရှု / ကစားပလက်ဖောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခံစားရ။
စစ်မှန်သောယခုနှစ်အကုန်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 3B စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းကိုရှိလိမ့်မည်, ထိုသူနှစ်ယောက်ကြားကသာ 2B PC များနှင့်ပတ်သက်ပြီး, ဒါပေမယ့်စွဲငြိဖွယ်ရာအရည်အသွေးကိုခြားနားချက်ညဥ့်နှင့်နေ့ဖြစ်၏။
CES တက်ရောက်သည့် VR ဂိမ်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခံစားရန်သလိုပဲ; ဖုတ်ကောင်, ဂြိုလ်သား, မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ spooky ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ pitting ။
ဘေးက PlayStation VR သရုပ်ပြခြင်း, တစ်ဦးမှမတ်တပ်ရပ် Sony က ရှေးရှေး VR နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကြောင်းစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ကစားသည့်ပြန်လည်နုပျိုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစျေးကွက်၏ချဲ့ထွင်နှင်ထုတ်မည်ရှင်းပြတယ်။
"အဘယ်အရာကိုမျှသစ်ကို VR ဂိမ်းထဲကတစ်ခုကစားတဲ့အခါသင်တွေ့ကြုံခံစားအတွက်စိတ်လှုပ်ရှား, စိတ်လှုပ်ရှားမှု ... ဘာမျှမမှနှိုင်းယှဉ်။ ဂိမ်း VR ခေတ်ရေစီးကြောင်းစေမည်! " သူကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ငါသည်သူ၏ပူဖောင်းကွဲချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ငါတော်တော်အချို့ရုပ်ရှင်ပေါ့, ဗီဒီယို (အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာ) VR ဖျော်ဖြေရေးလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမူကား, ငါသည်ဂိမ်းများကိုမလုပ်ကြပါဘူး!
ဒါကြောင့်ဂိမ်းကြွလာသောအခါတုန်းပဲ, ငါတကယ်ငါက Nvidia-powered PC များပေါ်တွင်ဂိမ်းစမ်းသပ်အဖြစ် consoles စများနှင့်အခြားစနစ်များကိုထားပြီးသူကို BabelTechReviews ၏, Mark Poppin, အတူ check လုပ်ထားဒါစျေးကွက်သိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစိတ်ဖောက်ပြန်စစ်ဆေးမှုများခဲ့ရသည်။
သူကသူတို့ထဲကအတော်များများကြောင့် VR ဂိမ်းကနဦးဟာယပူဇော်သက္ကာကိုစီရင်မရနိုင်သည်ကိုထောက်ပြ "မကောင်းတဲ့ထက်ပိုဆိုး။ "
ကောင်းသော VR ဂိမ်းတစ်ဦးကအများကြီးထွက်လှိမ့်နေကြတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်လတ်ဆတ်လွှတ်ပေးအတွက်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို၏ခွန်အားနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယျ။ အဆိုပါကောင်းသောဂိမ်းများကိုတကယ်ပဲအတူတူပစ်ချခဲ့သည့်ပစ္စည်းပစ္စယများပြဿနာများကိုထောက်ပြ။ ကောင်းသော VR သင် ", ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာထိုသို့ကွဲပြားခြားနားသော, ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုသင်သည်သင်၏ HMD ပေါ်တွင်တင်အခါတိုင်းစေသည်ပေးနိုင်ပါတယ် သူကရှင်းပြသည်။
"VR ဂိမ်းသုံးသပ်ရေးနှင့်ကောင်းသောသူမြားကိုထောက်ပြလူမှုမီဒီယာများအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကျေးဇူးတင်ပါသည်" သူကဆက်ပြောသည်။
ဂိမ်းကစားဘို့အစမတ်ဖုန်း HMDs ၏ချို့ယွင်းချက်, ပင် VR နေသော်လည်း ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Smithingham အလုပ်ကနေအနားယူဘို့ထိုသူတို့အတော်ပင်။
သို့သော်ဖြန့်ချိသည်ယခုနှစ်အဘို့နှင့်အများဆုံး VR ကဗီဒီယိုစီမံကိန်းများကို (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ခရီးသွားနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေရေး) အတွက်စီစဉ်ထားကြီးစွာသော VR ရုပ်ရှင်အဘို့, သူ HMDs တစ်ဦးကို PC မှ tethering ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်နေပါတယ် ... ပိုပါဝါပိုကောင်း!
"မိုဘိုင်း, YouTube နဲ့ Facebook မှာဗီဒီယိုတွေကို streaming တူသောအရာများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်" Smithingham မှတ်ချက်ချသည်။ "သင်, လူမှုမီဒီယာပစ္စည်းပစ္စယများနှင့် 360- ဒီဂရီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာ, မိုဘိုင်းနှင့်အတူတစ်န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ Y ကou're အဆိုပါ bandwidth ကို 4K ဗီဒီယိုကိုလိုအပ်ပါတယ်ကြိမ်5မှ4တက်နို့စို့။ သူတို့ကရူပဗေဒနိယာမကိုကျော်လွှားရန်ရှိသည်။ "
on-the-go စမတ်ဖုန်း HMD နှင့်ကိုယ်ရောစိတ်ပါ-ဖြစ်-In-the-Middle-of-က - - သင်တို့သည်ငါ၏ဆိတ်သငယ်နှင့်တူနေလျှင်သင်နှစ်ဦးစလုံးလိုခငျြပါလိမ့်မယ်, မိမိ PC ကို HMD အတူ။ နှစ်ဦးစလုံးအရသာကြိုးစားပါသင် / အမြင် play ချင်ပစ္စည်းပစ္စယများ၏ကြင်နာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် "သိ" ပါလိမ့်မယ်။
၏သင်တန်း, ထိုနောက်နှစ်ကောလာဟလများ ရှိ. , ကျနော်တို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် display ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ (တစ်ခုခုမှ tethering မဟုတ်) တစ်ဦးကို standalone HMD တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကိုသာတစ်ဦးကောလာဟလပါပဲ။
ကျွန်တော်ပြပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးရုပ်ရှင်နှင့်စပ်လျဉ်းတဦးတည်းအရာသိသာကြီး "ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ VR ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများကို '' ကြောက်မက်ဘွယ် freakin ခံရဖို့သွားကြသည်!"
ထိုအ VR consumerize ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ Drive ကိုအတူဟာ့ဒ်ဝဲ / software ကိုကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရေးသိသိသာသာအရှိန်သိရသည်။
capture အ Tools များ
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းပြခံရ 360 / VR ကင်မရာများ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူပါဆုံးသိသာခဲ့ပါတယ်။
ပြပွဲမှာထင်ရှားခဲ့ကြခြင်းနှင့်စားသုံးသူရိုက်ကူး / အမြင်ပွဲအတွက် overkill တူ timesaving အော်တိုချုပ်ဆော့ဖျဝဲပါဝင်သော Jaunt, Nokia Lytro, GoPro ရဲ့ Omni နှင့် Sphericam ရဲ့ကင်မရာ။
$ 100 စားသုံးသူအဆင့် 500 ဒီဂရီ Samsung, LG မဟာမိတ်များ, Bubl, Kodak, Giroptic, Nikon ကင်မရာ, Ricoh နှင့် 360fly အားဖြင့်ပြသကင်မရာများအဖြစ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ချစ်စရာ VR ပူးတွဲပါဖိုင်နံပါတ် - $ 360 ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရှိခဲ့သည်။
ဤအ YouTube နဲ့ Facebook မှာဗီဒီယိုကရှေးရှေးမှအယူခံလိမ့်မယ်နေစဉ်, အဓိကစိုးရိမ်ပူပန် VR အတွေ့အကြုံကိုကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုနှင့် virtualized ဗီဒီယိုခံစားအယှက်အံ့သောငှါဖြစ်၏။
Fox က, ဒစ္စနေး, MGM နှင့် Lionsgate တူသောဗိုလ်မှူးစတူဒီယို; အဖြစ်ဦးဆောင်-အစွန်း VR ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနောက်ဆုံးအကြောင်းအရာပျို့ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်မှုနိုင်သည့်တစ်ဦးက "စိတ်ကို / ခန္ဓာကိုယ်အကြားအငြင်းအခုံ" ထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးသေချာစေရန်မြင်ကွင်းများနဲ့ content အကြိမ်ပေါင်းများစွာရိုက်များနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်။
Pro ကိုကင်မရာများကို - တန်ဖိုးနည်း 360 ကင်မရာများတစည်းကို CES, Lewis က Smithingham (r), 30 နင်ဂျာ၏ဥက္ကဋ္ဌမှာရှိထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်နေစဉ်, လေးနက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်များအတွက်ဦးစားပေးရှေးခယျြမှုဖြစ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူဂျက်ဖ်မာတင်တို့ကကျင်းပလျက်ရှိသည့် Shericam2တူသောယူနစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Sphericam ရဲ့ဂျက်ဖ်မာတင် (တည်ထောင်သူ) ကရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံများကိုလူအစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်သူရုပ်ရှင်၏ storyline နဲ့စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဘယ်မှာထက်ပို 100 နှစ်ပေါင်းထုတ်လုပ်ထားပြီးရုပ်ရှင်ထဲကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုမှတ်ချက်ချသည်။
'ဒါဟာသင်တစ်ဦး racecar အတွက် GoPro တူးစင်ပါးရိုက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်ဝှမ်းမောင်းမ " သူကထောက်ပြသည်။ "ဒါဟာတစ်ချိန်ကပျော်စရာပေမယ့်ကောင်းသော VR ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်စတုရန်းကိုကြည့်ရှုသူများကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်သူ / သူမဇာတ်လမ်း unrolls ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူအနည်းငယ်သာကြံစည်မှုနှင့်အတူ viewer ကိုလမ်းပြဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေကြသည်ကိုအရိပ်အမြွက် - ပိုယ် & Gretel မုန့်အစအနများကဲ့သို့ - ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုညာဘက်ရဖို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လိုအပ်ပါတယ် "။
အကြောင်းအရာ Plus အား
Sphericam ရဲ့တည်ထောင်သူဂျက်ဖ်မာတင်ရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံများကိုလူအစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်သူရုပ်ရှင်၏ storyline နဲ့စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဘယ်မှာထက်ပို 100 နှစ်ပေါင်းထုတ်လုပ်ထားပြီးရုပ်ရှင်ထဲကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုမှတ်ချက်ချသည်။
'ဒါဟာသင်တစ်ဦး racecar အတွက် GoPro တူးစင်ပါးရိုက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်ဝှမ်းမောင်းမ " မာတင်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာတစ်ချိန်ကပျော်စရာပေမယ့်ကောင်းသော VR ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်စတုရန်းကြည့်ရှုသူကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်သူ / သူမဇာတ်လမ်းတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုထိန်းချုပ်သည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူအနည်းငယ်သာကြံစည်မှုနှင့်အတူကြည့်ရှုသူကိုလမ်းပြဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေကြသည်ကိုအရိပ်အမြွက် - ပိုယ် & Gretel မုန့်အစအနများကဲ့သို့ - ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုညာဘက်ရဖို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လိုအပ်ပါတယ် "။
တင်းကြပ်စွာပြပွဲမှာ VR သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ငါဆိုးမရေိက VR တဲများကတော့ဘူး။ ငါသည်ဤငါမှတ်မိအဖြစ် 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုအခြားနေရာရှာအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သော CES မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ထင်တယ်။
မှ Ian ပေါလုသည်ဆိုးအမေရိကတိုက် CIO Google က Trends (သူတို့အရာရာကိုခြေရာခံ) အရ, အ VR ဘာသာရပ်ဧရိယာ၌အကျိုးစီးပွားကနောက်ဆုံး 9,900 လအတွင်း 17 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်မှတ်ချက်ချသည်။
CES မှာကုမ္ပဏီသူတို့ Agnostic ပလက်ဖောင်းခဲ့ကြသည်ထောက်ပြကြီးအတိုအရှည်ထံသို့သွားလေ၏။ သူတို့၏ "အဖွဲ့ဝင်များက" ရှေးခယျြမှု၏ HMD အသုံးပွုနိုငျ - Samsung ကဂီယာ VR, HTC က Vive, Oculus Rift Google ကဒေးဒရင်းမ်, Zeiss VR တစ်ခုမှာ, Sony က PlayStation VR ။ သူတို့ကပင်အားဖြင့်လွှဲနှင့်သူတို့၏ဂီယာကိုအပ်ပုံကိုကောင်းစွာတွေ့မြင်မှနားကြပ်ထုတ်လုပ်သူအားပေးတယ်။
ကျနော်တို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးအကြောင်းအရာစစ်ဆေးရန်ငြင်းဆန် - ရိုးသားတဲ့ - တဦးတည်းတစ်ဦးချင်းအဖြစ်သူ၏အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ချုပ်ဖော်ပြပြီးနောက် ... "အဆင်မပြေ!"
မိုဘိုင်း HMDs ဖို့အကြီးအကျယ် streaming များ downloads, များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်, ကုမ္ပဏီသပ္ပါယ် streaming များနည်းပညာများအသုံးပြုခဲ့သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရောထွေးကုမ္ပဏီအတွက်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးတွေနဲ့တူတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မစွဲငြိဖွယ်ရာဖျော်ဖြေရေးပိုနှစ်သက် Gone မိန်းကလေး, X-Men: အနာဂတ်အတိတ်၏နေ့ရက်များ, 28 နေ့ရက်များနောက်ပိုင်းတွင်ခက်, Predator, ရုံးအာကာသ, ဂြိုဟ် VR, Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလား VR Die နှင့်အသစ်သောပစ္စည်းပစ္စယဒီနှစ်ထွက်လာမယ့်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းပို့လိုက်ကြတယ်မြင်နေပြီးနောက် VR ဇာတ်ကားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်ချိတ်ဆက်တယ် SMPTE နှင့်အလုပ်ကျောင်းသားများကို၏အရည်အသွေးဒီနှစ်ညီလာခံဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ကညာဘက်ရယူခြင်း - Lewin နှင့်သူ၏အဖွဲ့ချုပ်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဖွင့်ပိုင်ခွင့်ကိုကြည့်ရှုသူများအစာရှောင်ခြင်း SSD ကို (solid state drive) သိုလှောင်မှု Nvidia က-powered စနစ်များနှင့်စာရေးတံသုံးပြီး storyline ကိုထိန်းချုပ်ဘို့အကြောင်းအရာရဖို့မမြင်နိုင်သောအပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်တည်းဖြတ်နာရီပေါင်း။
ထိုအခါအလုပ်မြင်နေပြီးနောက် Smithingham အဘို့ပြု Conan 360 နှင့်ဒွန် liman ရဲ့မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ မမြင်နိုင်သော Mini-စီးရီးတစ်ခုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတို့နှင့်ကြည့်ရှုသူနည်းပညာနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှသာခြစ်ကြပါပြီဟုပြောအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်နှင့်ဂိမ်းများ, ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနှင့် applications များရရှိနိုင်ပါ၏ ဒါပေမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ / system ကိုရောင်းအား၏ချဉ်းကပ်လမ်း-up နှစ်အနည်းငယ်ယူပါလိမ့်မယ်။
ရှေးရှေးရုံကို CES မတိုင်မီသုံးအုပျစုမြားကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းင်:
GVRA (ဂလိုဘယ် Virtual Reality အစည်းအရုံး)
VRIF (Virtual Reality စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖိုရမ်)
ပထမ VR ဟာ့ဒ်ဝဲ (နှင့်တိုးအရောင်း) အကြောင်းကိုစားသုံးသူပညာပေး hellbent ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအသစ်သောပစ္စည်းပစ္စယဖြန့်ချိ / တီထွင်နေသည်အဖြစ် "ဂေဟစနစ်-ကျယ်ပြန့်ခေါင်းဆောင်မှု" ပေးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ငါသူတို့လုပ်ပေးမယ့်နေတဲ့ပထမဦးဆုံးအရာ AR / VR အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခက်ဆစ်အဘိဓာန်ဖွံ့ဖြိုးသည်အဘယ်ကြောင့်ရဲ့ပုံပါဘဲ။
VRIF ပွင့်လင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သူတို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး (နှင့်ဂိမ်း developer များ) ကိုပေးမည်တစ်ခုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ end-to-end ဂေဟစနစ်၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုသဘောတူညီမှုထောက်ခံအကြောင်းအရာရှေးရှေးထုတ်လုပ်ရန် Non-စီးပွားဖြစ် tools တွေနဲ့ပျော်မွေ့ / ကလူကိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို (ငွေရရှိအောင်) ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ "ဂျော်နီ Mnemonic စေခြင်းနှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်လို့ပြောလတံ့သောအရာကိုင်ငါကွန်ပျူတာလိုအပ် ... အွန်လိုင်းရချင်! "
သို့သော် CES အဖြစ်ရှေးရှေးကပြောသည် အို! "
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 virtual reality	2017-02-02
ယခင်: "ဒီခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး '၏လုပ်ခြင်းတွင်အဆိုပါပြကွက်များရုပ်ရှင်ပွဲတော်နောက်ကွယ်မှာ HBO ထုတ်လုပ်သောတစ်ဦးက
နောက်တစ်ခု: စီးရီးမေလတွင်ဖြန့်ချိသည်ထုတ်လုပ်မှုခုနှစ်တွင် Is: ဖြစ်သော CBS နယူး "Discovery Star Trek" ဖော်ပြ